DFS oo Iska Hor Keentay Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyadda iyo Ku-xigeenadooda – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
DFS oo Iska Hor Keentay Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyadda iyo Ku-xigeenadooda
Qaar Kamid ah Madaxweyne ku-xigeenadda Maamul goboleedyadda dalka ka jira ayaa ka hor yimid War-murtiyeedkii ay soo saareen Madaxweynayaasha maamul Goboleedyadda, kadib shir ay ku yeesheen magaaladda Kismaayo.
Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyadda ayaa isku raacay in ay hakiyaan xiriirkii ay la lahaayeen Dowladda Dhexe ee Soomaaliya,waxayna ku eedeeyeen in ay ka baxday heshiisyo horey loo gaaray.
Madaxweyne Ku xigeenka Puntland C/xakiim Camey oo warbaahinta la hadlay kadib go’aanadda soo baxay ayaa sheegay in go’aanasadaas aan wax wadatashi ah lagala sameynin, sidaasi awgeedna uu u arko mid aan soconeyn.
“Kuma raacsani go’aanka Kismaayo, mana la igala tashan, dowlad hal qof ma ahan, waa saddex hey’adood is ilaaliya oo wada shaqeeya, go’aanada masiiriga ah waxay u taallaa Golaha Xukuumadda ayaa go’aan ka gaaraya, waa adag tahay in qof uu go’aan qaato, sharcigana ma waafaqsana”ayuu yiri C/xakiin Camey.
Dhanka kale Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabey, oo warbaahinta kula hadlay dhankiisa Degmadda Cabudwaaq ayaa kasoo horjeystay dhamaan go’aamadda ay soo saareen Madaxweynayaasha,wuxuuna sheegay in aysan xiriirka u jari karin Dowladda Dhexe ee Somaaliya.
Dadka Siyaasadda Falanqeeya ayaa aamisan in Dowladda Dhexe ee Soomaaliya ay iska hor keenayso Madaxweynayaasha Maamul goboleedyadda dalka ka jira iyo Ku-xigeenadooda,islaamrkaana qaarkood loo balan qaaday Lacago iyo xilal.